MySQAR: Tambajotra Sosialy Voalohany An’i Myanmar · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2018 2:13 GMT
Io no fijery ao ambadik'ilay vovonana media sosialy MySQUAR amin'ny fiteny Birmana. Naorin'i Rita Nguyen tamin'ny taona lasa, nitombo be tao anatin'ireo volana vitsy lasa teo ny fampiasana azy
Fony nanomboka ny tetikasa izy, hoy ny nambaran'i Nguyen tao anaty tafatafa iray, dia niandrandra ny hahita mpampiasa somary sy dia manahirana miasa amina fahazoana fidirana ambany be. Latsaky ny 1% ny fidirana amin'ny aterineto ao Myanmar (na Birmania), araka ny Wikipedia, ny ankamaroany dia azo avy amin'ireo toerana sady fisotroana kafe no misy aterineto ireny.
Nitombo ny fifandraisana ary hitohy ny fanaovana izany amin'ireo volana manaraka, satria mpamatsy serasera roa goavana no ho avy ao Myanmar amin'ity taona ity: ny vondrona Norveziana Telenor sy ny Ooredoo avy ao Qatar.
Niatrika fahasahirana lehibe ihany koa i Nguyen tao anatin'ny tontolon'ny teknolojia ao Myanmar: ny endri-tsoratra malaza indrindra teo amin'ireo vohikala amin'ny fiteny birmana, antsoina hoe Zawgyi, dia tsy mifanaraka tamin'ny Unicode, izay nitarika ho aminà olana midadasika kokoa.